सोमबार, फेब्रुअरी 22, 2021 बिहीबार, अप्रिल 7, 2022 Douglas Karr
यदि मैले तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने मौका पाएको छु भने, म विश्वस्त छु कि तपाईंले मलाई व्यक्ति, हास्यपूर्ण र अनुकम्पापूर्ण भेट्टाउनुहुनेछ। यदि मैले तपाईलाई व्यक्तिगत रुपमा कहिले पनि भेटेको छैन भने पनि मलाई डर लाग्छ कि मेरो सोशल मिडिया उपस्थितिमा तपाईले मेरो बारेमा के सोच्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले मलाई पछिल्लो दशकमा बनाउनु भयो भने, म विश्वस्त छु कि तपाईंले सोशल मिडियामा संलग्न हुनको लागि मेरो उत्सुकता देख्नुभयो। यदि तपाईं अझै वरपर हुनुहुन्छ भने, म आभारी छु तपाईं अझै पनि यहाँ हुनुहुन्छ - किनकि मैले राम्रो अनजान सम्बन्धहरू निर्माण गर्ने र अरूलाई राम्रोसँग बुझ्ने अवसरमा उत्साहित सामाजिक मीडिया हेडफिस्टमा उत्साहित भएँ। कम्तीमा भन्नुपर्दा यो एउटा उथलो पोखरी थियो।
सम्भवतः यदि तपाईंले मलाई कुनै कार्यक्रममा बोलेको देख्नु भएको थियो, मसँग काम गर्नुभयो, वा मेरो बारेमा सुन्नुभयो र कुनै पनि सामाजिक मिडिया च्यानलमा मेरो साथीको रूपमा थप्नुभयो… मैले तपाईंसँग अनलाइन जडान पनि गरें। मेरो सामाजिक मिडिया च्यानल एक खुला पुस्तक थियो - मैले मेरो व्यापार, मेरो व्यक्तिगत जीवन, मेरो परिवार ... र हो ... मेरो राजनीति को बारे मा साझा। जडान को आशा को साथ सबै।
यदि मैले अपडेट लेखेको थिएँ (म # goodpeople लाई ट्याग गर्छु) जसले अर्का व्यक्तिको बलिदान गर्ने र मद्दत गर्ने कसैको बारेमा कथा साझा गरेको थियो ... म दर्जन दृश्यहरू पाउनेछु। यदि मैले अर्को प्रोफाईलको राजनीतिक अपडेटमा बार्बमा फालिदिएँ भने, म सयौं भएँ। धेरै जसो मेरो फेसबुक दर्शकले मेरो एक पक्ष मात्र देख्यो, र यो भय was्कर थियो।
के सामाजिक मिडियाको अभाव जुनसुकै सन्दर्भमा छ। म तपाईलाई सबै पटक भन्न सक्दिन कि मैले टिप्पणी प्रस्ताव गरेँ र तुरुन्तै मैले वास्तवमा विश्वास गरेको कुराको विपरीत लेबल लगाएको थिए। प्रत्येक सोशल मिडिया अपडेट गर्दछ कि एल्गोरिदमले दुबै जनजातिमा पुश र पुल प्रवर्धन गर्दछ जुन आक्रमणमा जान्छन्। दुर्भाग्यवस, अज्ञातले मात्र यसलाई थप गर्दछ।
म यहाँ घृणाको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन ... यद्यपि यो दुखद पनि सिक्न सकिन्छ। म साधारण चीजहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु… जस्तै उच्च शक्तिमा विश्वास, शिक्षा, सरकारको भूमिका, धन, व्यवसाय, आदि। तथ्य यो छ कि हामी सबैमा हामीमा निहित विश्वासहरू छ, ती विश्वासहरूलाई बलियो बनाउने अनुभवहरू, र हाम्रो धारणा संसारका कारण तिनीहरू फरक छन्। त्यो त्यस्तो चीज हो जसलाई सम्मान गर्नुपर्दछ तर सामाजिक मिडियामा अक्सर हुँदैन।
एउटा उदाहरण जुन म प्रायः प्रयोग गर्दछु त्यो व्यवसाय हो किनभने म करीव years० बर्षको उमेर सम्म म एक कर्मचारी थिएँ। मैले वास्तवमै मेरो व्यवसाय सुरु गरिसकेको र मानिसहरूलाई रोजगार दिइसके सम्म, म वास्तवमै व्यवसाय सुरु गर्ने र सञ्चालन गर्ने सबै चुनौतीहरूका बारे बेवास्ता गर्थें। मैले नियमहरू, सीमित सहायता, लेखा, नगद प्रवाह चुनौतीहरू, र अन्य मागहरू बुझिन। साधारण चीजहरू ... जस्तै कम्पनीहरूले प्राय: (धेरै) उनीहरूको चलानीहरूलाई भुक्तानी गर्न ढिलाइ गर्दछ।
मैले फेसबुकलाई १,००० भन्दा बढी साथीहरूमा झारिदिएँ र त्यो परिमाणलाई अगाडि बढ्ने घटाउने क्रम जारी राख्नेछु। धेरै जसो मँ सबै चीजको लागि अब यस्तो व्यवहार गर्दछु यदि यो सार्वजनिक भइरहेको छ - चाहे म यसलाई त्यसरी नै मार्क गर्छु वा छैन। मेरो सगाई फेसबुक मा नाटकीय गिरावट आएको छ। म अन्य व्यक्तिहरूको पनि सबैभन्दा नराम्रो देखिरहेको छु भनेर चिन्न म उत्सुक छु। म प्राय: तिनीहरूको प्रोफाइलमा क्लिक गर्दछु उनीहरूको राम्रो व्यक्तित्वमा वास्तविक हेराई पाउनका लागि।
मैले ब्यापारको लागि फेसबुक प्रयोग गर्न पनि रोकेको छु। फेसबुक एल्गोरिदम तपाईको लागि निर्मित छन् भुक्तानी तपाईंको पृष्ठ अपडेटहरू हेर्नको लागि र मलाई लाग्छ कि यो वास्तवमै खराब छ। व्यवसायले वर्षौं बित्दै जानका लागि खर्च गर्‍यो र त्यसपछि फेसबुकले सबै तर भुक्तान गरिएका पोस्टहरू फ्यायर गर्‍यो तिनीहरूका अनुयायीहरूबाट ... पूर्णतया लगानी गुमाउँदछ तिनीहरूले एक समुदाय curating मा गरेका छन्। मलाई मतलब छैन यदि म फेसबुक मा अधिक व्यापार पाउन सक्दछु, म जाँच्दिन। थप रूपमा, मँ त्यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको साथ कहिल्यै व्यवसायको जोखिम लिन चाहन्न - जुन सब धेरै सजिलो छ।
कसैसँग जडान गर्नको लागि म अझै खुला छु LinkedIn किनभने म केवल मेरो व्यापार, मेरो व्यवसाय सम्बन्धित लेखहरू र मेरो पोडकास्टहरू मात्र सेयर गर्नेछु। मैले अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ व्यक्तिगत अपडेटहरू साझेदारी गरेको देखेको छु र यसको बिरूद्ध सल्लाह दिन्छु। तपाईं बोर्डरूममा हिंड्नुहुन्न र मान्छेलाई चिच्याउन गर्नुहुन्न… लिन्क्डइनमा यो नगर्नुहोस्। यो तपाईंको अनलाईन बोर्डरूम हो र तपाईंले त्यहाँ व्यावसायिकताको त्यो स्तर कायम गर्न आवश्यक छ।
इन्स्टाग्राममा पनि, म होशियार हुनुपर्छ। मेरो बोरबोन संग्रहले वास्तवमा मलाई चिन्ताले मलाई मद्दत गर्‍यो भनेर मबाट कनेक्ट गराएको छ। यदि मेरो इन्स्टाग्रामको नाम "मेरो बुर्बन संग्रह" राखिएको छ भने, मैले स collected्कलन गरेका बोर्डनहरूको एक प row्क्ति ठीक छ। जे होस्, मेरो पृष्ठ म हो ... र मेरो वर्णन life० भन्दा माथिको जीवन हो। नतीजाको रूपमा, धेरै धेरै बुर्बन फोटोहरू, र मानिसहरूले सोच्छन् म मँडा छु। Oy।
म खुल्लम खुल्ला मेरो मा साझा व्यक्तिगत ट्विटर खाता तर मसँग पनि एक पेशेवर छ Martech Zone र Highbridge कि म कडाई खण्ड। म समय-समयमा मानिसहरूलाई फरक जान्न दिन्छु। म तिनीहरूलाई यो थाहा दिनुहोस् Martech Zoneको ट्वीटर खाता अझै म नै हो ... तर विचारहरू बिना।
मैले ट्विटरको बारेमा कदर गर्दछु कि एल्गोरिदमले मेरो सबैभन्दा विवादास्पद ट्वीटको सट्टा मलाई सन्तुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। र ... ट्विटरमा बहसहरू चल्काउने सूची बनाउन सक्छ तर सधैं स्ट्रिमको माध्यमबाट धक्का नदिनुहोस्। मसँग ट्विटरमा सब भन्दा बढी सम्पन्न हुने कुराकानीहरू छन्… जब तिनीहरू भावुक बहसको बेला पनि हुन्छन्। र म प्रायः एक कुराकानीलाई डिफेलेट गर्न सक्छु जुन दयालु शब्दको साथ भावनात्मक भइरहेको छ। फेसबुकमा, त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन जस्तो देखिन्छ।
मेरो विचार दिन ट्विटर मेरो लागि कठिन च्यानल हुन गइरहेको छ... तर मलाई थाहा छ कि यसले अझै पनि मेरो प्रतिष्ठामा चोट पुर्‍याउन सक्छ। मेरो सम्पूर्ण प्रोफाइलको सम्पूर्ण वार्तालापको लागि सन्दर्भ बाहिर लिइएको एउटा प्रतिक्रियाले विनाश गर्न सक्छ। मैले विगतमा भन्दा ट्विटरमा के साझा गर्छु भनेर निर्णय गर्न म धेरै समय खर्च गर्छु। धेरै पटक, म ट्वीटमा प्रकाशित क्लिक गर्दिन र अगाडि बढ्छु।
यस बीचमा, म मेरो उद्योगका नेताहरूको डरमा खडा छु जुन राम्रोसँग सम्मानित छन् जुन पर्याप्त अनुशासित छन् सोशल मिडियामा कहिल्यै अडान लिन सक्दैनन्। कसै-कसैलाई यो अलि कायरता हो जस्तो लाग्न सक्छ... तर मलाई लाग्छ कि आलोचना गर्न र अनलाइनमा बढ्दै गएको संस्कृतिलाई रद्द गर्नु भन्दा आफ्नो मुख बन्द गर्न धेरै साहस चाहिन्छ।
सबै भन्दा राम्रो सल्लाह, दुर्भाग्यवश, हुनसक्छ कुनै पनि विवादास्पद कुरामा कहिल्यै छलफल नगर्नुहोस् जुन गलत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ वा सन्दर्भबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ। म जति बूढो हुँदै जान्छु, त्यति नै म यी व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाउँदै, टेबुलमा थप निमन्त्रणा प्राप्त गर्ने र तिनीहरूको उद्योगमा थप लोकप्रिय भएको देख्छु।
"यसमा सबै दृष्टिकोणहरू समावेश छन् - धर्म, राजनीति, यौन प्राथमिकता, जाति, सम्पत्ति ... आदि।"
यदि प्राथमिकताको सट्टा यौन अभिमुखीकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई थप हालको र समावेशी रूपमा देख्नुहुनेछ। हामी सीधा, समलिङ्गी, वा अरू केहि हुन रोजिरहेका छैनौं। यो हाम्रो पहिचान हो।
तपाईंले यो लेख्नु भएकोमा मलाई साँच्चै मन पर्छ। यसले देखाउँछ कि तपाईले वास्तवमा केहि पनि सिक्नु भएको छैन। तपाईंको षड्यन्त्र सिद्धान्त, घृणा, र समग्र मूर्खता समस्या थियो। सामाजिक सञ्जाल शत्रु होइन (तपाईले औंल्याए अनुसार) यो वास्तवमा तपाई केवल एक घृणित व्यक्ति हो भन्ने हो... जापानमा रेडियोएक्टिभ चुहावटको बारेमा "उनीहरूलाई केही गोरिल्ला ग्लु पाउनुहोस्" भनेर तपाईंले फ्लिप्यान्ट रूपमा भन्नुभएको त्यो ट्विट सम्झनुहोस्? मलाई याद छ ... यो 10 दिन अघि थियो। आशा छ कि तपाईको प्रतिष्ठा यस प्रक्षेपणमा जारी रहनेछ।
जैक, तपाईंको टिप्पणी को लागी धन्यवाद। मलाई लाग्छ कि यसले मेरो लेख र सामाजिक सञ्जालको दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्दछ र तपाईंसँग स्पष्ट रूपमा मेरो बारेमा भयानक दृष्टिकोण छ जबकि मेरा सहकर्मीहरू, ग्राहकहरू र साथीहरूले गर्दैनन्। शुभ कामना गर्दछु।
वाह! डग कस्तो उत्कृष्ट लेख जुन चीजहरूमा अन्तर्दृष्टिले भरिएको छ हामी सबै व्यक्तिगत रूपमा बढी सचेत हुनुपर्छ। तर तपाईले उल्लेख गर्नुभएझैं, एक व्यक्ति हुनु र अनलाइन व्यवसाय चलाउनको लागि सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्दा त्यो गर्नुको महत्त्व अझ चुनौतीपूर्ण र ट्विस्टी छ!
यस्तो देखिन्छ कि तपाईं र मैले एक अर्कासँग यो अनलाइन र अफलाइन जडान धेरै वर्ष पहिले सुरु गरेका थियौं, यो सधैं भएको जस्तो देखिन्छ। बाटोमा विभिन्न क्याफे र व्यवसायहरूमा कफीका धेरै कपहरू। सर्कल सिटीका दिनहरूबाट मेरो अन्य कुनै पनि मित्रतामा कुनै अपमान छैन, तपाईको एउटामा मलाई सायद भौगोलिक रूपमा धेरै टाढा भएको कारणले हामी धेरै कफी, छलफल, बहस, हाँसो साझा गर्न सक्दैनौं र हो, सायद केही बोरबोन पनि साझा गर्न सक्दैनौं। थप नियमित आधारमा।
यहाँ तपाईं, हाम्रो व्यवसाय र सामाजिक मिडिया छ। हामी यी पानीहरूलाई होसियारीपूर्वक नेभिगेट गर्न जारी राखौं र हाम्रा ग्राहकहरूलाई किनारहरू बीच सुरक्षित रूपमा मार्गनिर्देशन गर्न मद्दत गरौं!